Trichloroisocyanuric acid - China Juancheng J.Randall Industry & Trade
ProductsCategory: Organic Chemicals / hydrocarbon / alkane Chinese aha: TCCA (makwaara dị ka: Strong chlorine) English aha: Trichloroisocyanuric acid (afo: TCCA) CAS NO: 87-90-1 molekụla usoro: C3Cl3N3O3 MW: 232,41 EC NO: 201- 782-8 agbaze uche: 247-251 ℃ chlorine ọdịnaya (%): ≥ 90,0 Mmiri ọdịnaya (%): ≤ 0,5 onye Onyenwe anyị + (1% ngwọta): 2,7 ~ 3.3 ojiji TCCA disinfection arụmọrụ, a ọgbọ ọhụrụ nke sara mbara-ụdịdị dị iche iche, elu arụmọrụ, ala toxicity fungicides, bleach ...
ngwaahịa Category: Organic Chemicals / hydrocarbon / alkane
Chinese aha : TCCA (makwaara dị ka: Strong chlorine)
English aha : Trichloroisocyanuric acid (afo: TCCA)
molekụla usoro: C 3cl 3N 3O 3
agbaze uche : 247-251 ℃
chlorine ọdịnaya (%) : ≥ 90,0
Mmiri ọdịnaya (% ): ≤ 0,5
onye Onyenwe anyị + (1% ngwọta ): 2,7 ~ 3.3
TCCA disinfection arụmọrụ, a ọgbọ ọhụrụ nke sara mbara-ụdịdị dị iche iche, elu arụmọrụ, ala toxicity fungicides, bleach na mgbochi shrinking n'ụlọnga. Tumadi eji maka mmiri ọṅụṅụ, ulo oru mmiri imegharị ihe maka iji, igwu mmiri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, hotels, n'ámá, ezinụlọ, ụlọ ọgwụ, na mgbochi nke azụ ọrịa ndị dị ka egg disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ.
Fọrọ nke nta niile dịkwa ka usoro ha, nje bacteria, nje, spores nwere a na-egbu utịp ke egbu ịba ọcha n'anya A, ịba ọcha n'anya B virus mmetụta nke HIV virus nakwa nwere ezi disinfection, na ojiji nke mma na-adaba adaba, ngwaahịa nwere ike ọtụtụ ebe e ji nri, Mmiri ara ehi, osikapa nkpuru nhazi, mkpụrụ ichebe, bleaching, ajị ịda mbà na-àmà, kwa ụbọchị chemical bleaching, osisi ebu akwụkwọ, roba na batrị ihe, dị ka ọxịdashọn.
Na ụdị nke ngwaahịa nkọwapụta s
: 8-30 ntupu urughuru size, 20-60 ntupu (nwere ike ahaziri)
flake nkọwa: 1 gram, 5 grams, 10 grams, 15 grams, 20 grams, 30 grams, 50 grams, 100 grams, 125 grams, 150 grams, 190 grams, 200 grams, 250 grams, 500 grams, wdg (dị ka ahaziri)
packaging : E nwere akpa, plastic bọket, katọn, katọn ndị ọzọ nkwakọ a dịgasị iche iche nke nkọwa. (Nwere ike ahaziri).
Osote: Trichloroisocyanuric acid
ntụ ntụ Trichloroisocyanuric Acid
Chlorine dioxide 1g mbadamba